“Koox lagama maamuli karo Jakarta, Beijing ama Nanjing” – Pirelli oo furka ku xoortay milkiilayaasha Inter Milan! – Gool FM
“Koox lagama maamuli karo Jakarta, Beijing ama Nanjing” – Pirelli oo furka ku xoortay milkiilayaasha Inter Milan!
(Milano) 31 Okt 2016 – Guddoomiyaha sharikadda taayarrada ee Pirelli jaalle Marco Tronchetti Provera ayaa difaacay macallinka Frank de Boer, isagoo taa biddaalkeeda weerar ku qaaday milkiilayaasha cusub ee Inter oo uu ku eedeeyay inaysan kooxda u ”dhowayn.”
De Boer ayaa cadaadis ba’an wajahaya ka gadaal markii ay Inter xalay qabsatay guuldarradii 4-aad muddo 5 kulan ah iyadoo dheeshey 11 kulan oo qura kaddib markii ay 1-0 ku tuntay Sampdoria, balse ninkan madaxda u ah sharikadda ay iidhehda u sameeyso Nerazzurri ayaa dhibaatada kooxda ku eedeeyay Suning Group iyo Erick Thohir.
“Xitaa macallin kasta oo wayn oo aan haysanin taageerada naadigiisa wuu fashilmayaa,” ayuu Provera u sheegay Gr Parlamento.
“Naadi kubadda cagta ah lagama maamuli karo Jakarta, Beijing ama Nanjing. Inter waxay ganatay 15 koob muddo 6 sanadood ah, taasoo ay ugu wacnayd milkiilayaasha oo goob joog ahaa.” ayuu raaciyay.
“Guud ahaan kubadda, qaaciddada qura ee lagu badin karaa waa milkiilayaal kooxda u dhow isla markaana jecel sida Berlusconi iyo AC Milan, Agnelli iyo Juventus.